पूर्वआईजीपी अच्युत खरेलको खुलासा : पूर्वडीएसपीमार्फत् वामदेवले मसँम २५ लाख घुस मागेका थिए-Nepali online news portal
पूर्वआईजीपी अच्युत खरेलको खुलासा : पूर्वडीएसपीमार्फत् वामदेवले मसँम २५ लाख घुस मागेका थिए
पूर्वप्रहरी महानिरीक्षकअच्युतकृष्ण खरेलले अार्इजीपी हुँदा कांग्रेस र एमालेलार्इ लाखाैं चन्दा दिएकाे खुलासा गरेका छन् ।
पूर्वआईजीपी अच्युतकृष्ण खरेलकाे भर्खरै प्रकाशित अात्मकथामा यस्ताे खुलासा गरेका छन् । ३८० पृष्ठको आत्मकथामा खरेलले नेपालका नेताहरू तस्कर र माफियासँग कतिसम्म साँठगाँठ गर्दा रहेछन् भन्ने थप खुलासा गरेका छन् ।यो पुस्तकमा खरेलले तत्कालीन गृहमन्त्री वामदेव गौतमका मानिसले आफूसँग २५ लाख रुपैयाँ मागेको दाबी गरेका छन् ।
चुनावका बेला विभिन्न व्यापारीहरुबाट उठाएर कांग्रेसलाई ३० लाख र एमालेलाई १० लाख दिएको खरेलको भनाइ छ । पुस्तकको २७२ औं पृष्ठमा भनिएको छ- ‘राति करिब ११ बजे फोन आयो । पूर्वडीएसपी नरहरि संग्रौलाले गरेका रहेछन् । उनी मेरै उमेरका हुन् । मेरै टोलबासी, मेरा शुभचिन्तक । उनी एमालेसँग निकट थिए । वामदेवसँग पनि निकट रहेछन् भन्ने थाहा थिएन ।’
यसरी घुस माग्ने व्यक्तिलाई खरेलले त्यसबेलै किन कारवाही गरेनन् ? उनी त्यसबेला प्रहरीको उच्च ओहोदामै थिए । तर, घुस मागेकै हो भने यसबारे छानविन नगरेर खरेलले अहिले किताबमा मात्रै किन लेखे ? खरेलको आत्मकथा पढ्दा यस्तो प्रश्न उठ्छ । किनभने, घुस दिनेमात्रै होइन, माग्ने पनि अपराधी नै मानिन्छन् ।
त्यसो त आत्मकथामा पूर्वआइजीपी खरेलले प्रहरी संगठन भित्रको सिस्टम र गरिमालाई जोगाउन अदालत गएको भनेका छन् । यद्यपि आफ्नो मुद्दा जिताउनका लागि सर्वोच्चका न्यायाधीशहरुसँग विचौलियामार्फत आफूले भनसुन गरेको पनि खरेलले ठाउँ-ठाउँमा खुलाएका छन् ।
तत्कालीन आइजीपी खरेलले कांग्रेसलाई ३० लाख रुपैयाँ र नेकपा एमालेलाई १० लाख रुपैयाँ चुनाव खर्च जुटाइदिएको आत्मकथामा उल्लेख गरेका छन् । खरेलले लेखेका छन्- ‘एमाले नेता माधवकुमार नेपालले उक्त रकम पार्टीको खातामा जम्मा गरिदिनुभएछ ।’
त्यो रकम तत्कालीन उपत्यका अपराध महाशाखाका प्रहरी अधिकारी भरत जीसीमार्फत व्यापारीहरुबाट उठाएर दलका नेतालाई बुझाएको पूर्वआइजीपी खरेलले बताएका छन् ।
तत्कालीन आइजीपी खरेलले विमानस्थलको तस्करी रोक्न आफूले प्रयास गरेको आत्मकथामा लेखेका छन् ।
खरेलले कांग्रेसका नेता र राजासँग आफ्नो सम्बन्ध राम्रो रहेको र माओवादीप्रति कडा रुप अपनाएको उनको आत्मकथामा पढ्न पाइन्छ । कांग्रेस नेता खुमबहादुरलाई भने खरेलले तस्करहरुसँग साँठगाँठ भएको नेताका रुपमा चित्रित गरेका छन् ।
वामदेव गौतम गृहमन्त्री हुँदा उनले माओवादीलाई फाइदा पुर्‍याएको र यही विषयले उनीसँग आफ्नो अन्तरविरोध सुरु भएको खरेलको तर्क छ । खुमबहादुरसँगको अन्तरविरोध चाहिँ तस्करहरुका कारणले भएको खरेलको तर्क छ ।